Alaeze, akwukwo ohuru nke Jo Nesbø. Nyochaa | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Alaeze, akwukwo ohuru nke Jo Nesbø. Nyocha
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Ndị edemede, Akwụkwọ, Black akwụkwọ
Alaeze bụ akwụkwọ ọhụrụ nke Jo Nesbø. Onye ode akwukwo Norwegian jikọtara aha ole na ole ebe ọ dọbara Harry Oghere, ya kasị mara amara na soro agwa. Ugbu a ọchịchịrị na-agwa anyị akụkọ banyere ụmụnne abụọ. Nke a bụ nke m nyocha.
1.1 Roy bụ onye na-akọ akụkọ na-agwa anyị ndị anyị bụ. Ya mere na ọ bụ ihe niile na ọ dịghị onye. Ọ bụ nnụnụ ugwu na-enweghị aha.
1.2 "Ezinụlọ bụ nke mbụ. Maka ka mma na ka njọ. N'iru nke ndi mmadu fọduru.
1.3 “Anyị niile dị njikere ire mkpụrụ obi anyị. Ewezuga na nke ọ bụla na-etinye ego dị iche na ya.
2 Na nkenke
Ihe bụ ugbo Opgard zoro ezo n’elu ugwu. Ndị Opgards bụ ezinụlọ nke nna, nne na ụmụnne nwoke abụọ. Roy na Carl, ebe naanị Roy bi ugbu a, bụ onye kacha ochie. Naanị ya, taciturn, nnụnụ na-atọ ụtọ na onye njikwa nke ọdụ mmanụ obodo, ọ na-eduga ndụ dị ka ihe nzuzu na ndụ dị jụụ, na-enweghị mmekọrịta ọ bụla na ndị bi na ya, n'agbanyeghị na ọ maara onye ọ bụla na onye ọ bụla maara ya. Ma ndụ ahụ ga - agbanye isi - nke na - abụghị nke mbụ na ọ gaghị abụ nke ikpeazụ - mgbe nwanne ya nwoke Carl laghachiri mgbe afọ 15 gachara mba ọzọ ebe ọ hapụrụ mgbe nne na nna ya nwụsịrị n'ihe mberede ụgbọ ala.
Carl anaghị alaghachi naanị ya, ọ na-eweta Shannon, nwunye ya, onye na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ na nke nwere àgwà ndị na-adọrọ mmasị dị ka ọ kachasị. Ha abụọ biara na oke atụmatụ nke aka ha kamakwa iji mee ka obodo nwee ọganiihu: wuo otele okomoko na mpaghara.
Ha nwere Carl nwere ikike, na-enwe obi ụtọ mgbe niile, na-enwu gbaa, na-enwe ọ andụ ma na-enwe ọ ,ụ, n'ihu onye dị jụụ, nke dị oke egwu na nke na-adịchaghị mma Roy, onye na-ewepụkarị igbe ahụ n'ọkụ. Ọ ga-aga n'ihu na-eme nke a n'ihi na ụmụnne Opgard ha na-ezochi ọtụtụ akụkọ ndị ọzọ n'oge gara aga nke a ga-esonyere ndị nke ugbu a na ọdịdị ha kpatara, nke egosiworị karịa n'ụzọ doro anya na mbido mmeghe ahụ na-awụ akpata oyi.
Roy bụ onye na-akọ akụkọ na-agwa anyị ndị anyị bụ. Ya mere na ọ bụ ihe niile na ọ dịghị onye. Ọ bụ nnụnụ ugwu na-enweghị aha.
Nke ahụ bụ ihe Carl na-ekwu na mkparịta ụka obere oge ọ bịarutere ma gosi ya nwunye ya. Roy bu onye gwara anyi akuko nile na onye mbu, olu akụkọ Nesbø na-emebu na akwụkwọ akụkọ ndị e bipụtara na-abụghị usoro nke Harry ogheredị ka Ndị isi o Ọbara na snow y Ọbara ọbara. O gosiputara nke ahu dị jụụ n'ime ya. Anyị niile nke ọkara dere mara na ọ na-enye ohere nnwere onwe ime ihe na iche iche anyị chọrọ iwepụ, ọbụlagodi na anyị ga-achụrịrị echiche nke ndị ọzọ fọdụrụnụ. Na mgbakwunye, Roy na-agwa onye na-agụ ya ọtụtụ oge, dị ka a ga - asị na ọ na - agwa anyị okwu na - adabere n’elu tebụl mmanya na-a aụ mmanya site n’oge ruo n’oge.
"Ezinụlọ bụ nke mbụ. Maka ka mma na ka njọ. N'iru nke ndi mmadu fọduru.
Ọ bụ nkebi ahịrịokwu ahụ na-achịkọta ya ma na-etinye ihe niile ihe a na-agu na ya Alaeze. Ọ bụ naanị ihe mkpali na echiche bụ na Roy ga-eme ihe ọ na-emere ya na nwanne ya ọ kachasị. Ihe ọ na-eme bụ ihe niile na agbanyeghị niile.
Agụwo m banyere akụkụ okpukpe (nke na-abụghị akụkọ ifo, ndị na-eme isi akụkọ na mgbasa ozi) na akụkọ a tinyere Ken na Ebel, nke bụkwa aha nke abụọ nke ihe odide ahụ. Ma ee e, ọ dịghị nke ahụ n’ihi na akụkọ a anaghị akwụsị ka nke ụmụnne ndị mbụ nke Akwụkwọ Nsọ. Ihe enwere bụ ihe dị na Nesbọ, nke na-adịghị aghọgbu onye ọ bụla ma ọ bụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ, ọ bụghị ndị na-agụ akwụkwọ kwesịrị ntụkwasị obi: a nnukwu foto nke ọdịdị mmadụ nke na-agagharị n’etiti ịhụnanya na ọnwụ nke ọdachi kpatara.
Ma Carl Opgard abụghị onye obi ebere na onye obi ebere, n'agbanyeghị mmejọ a tara ya, Roy abụghịkwa onye obi ọjọọ nke Ken. Ma ị kwenyesiri ike na ya ka ị na-amata ha na Nesbø -ji nka ahia ụgha ahụ-na-eme ka ị hụ mgbawa dị omimi nke akpụkpọ ahụ ha n'oge kwesịrị ekwesị. Mmezu nke onye edemede a na-enweta mgbe niile, bụ nke ahụ i tinyekwara onwe gi n’ime akpukpo ahu, ọkachasị nke Roy, onye ị hụrụ onwe gị isoro (ma zie ezi) n'otu ebumnuche na usoro ọ na-ewere, ọbụlagodi na ha dị egwu.
Kedu ihe ị gaghị eme maka nwanne nwoke na maka ihere nke izobe ma ọ bụ zere ihe arụ? Roy buuru nke ahụ na iji oke na ihunanya nwanne nwoke mana kwa ndakpọ olileanya, mmechuihu na anyaụfụ, iwe na aghụghọ na adịghị ike, site n'ọchịchọ gabigara oke na ịrara aka nke ọbara ahụ bụ nke gị na nke ị chụrụ ma bibie maka ya n'ụzọ niile enweghị atụ. Na kwa ihunanya i chere na i kwesiri, nke ahụ nwere ike bụrụ ihe ziri ezi na eziokwu otu oge na ndụ gị, ebe ọ bụ na onye ị bi bụ mmejọ zuru oke. Ọfọn Roy mere, mee, na ọ ga-achụkwa ihe niile n'àjà maka nwanne ya, ọ bụ ezie na Carl ekwesịghị ya ma ọlị. Nke ahụ bụ nna ukwu ahụ.
“Anyị niile dị njikere ire mkpụrụ obi anyị. Ewezuga na nke ọ bụla na-etinye ego dị iche na ya.
Ihe ngwugwu a mechara site na ihe osise nke ihe odide nke abụọ nye ndị na-achọkwa oke ọchịchọ, ụgha na ọdịdị. Site na onye na-ere ụgbọ ala nke na-agba ọsọ na mpaghara obodo yana bụrụkwa onye na-enweghị ego na-akwụ ụgwọ, nye nwunye ya, ndị na-arụ ọrụ ebe a na-ere mmanụ ụgbọ ala, onye isi obodo mbụ, odeakụkọ obodo na di nke enyi nwanyị mbụ Carl Opgard ma ọ bụ onye na-agba asịrị na akwa.
Ha niile gbara ya gburugburu Gburugburu ikuku na mmegbu nke obere obodo ebe enwere otutu izochi n'ime ime ulo, karie ihe nzuzo na obara. Naanị Kurt olsen, onye uwe ojii na-enyocha ihe ndị mere n'oge gara aga na nke ugbu a gburugburu Opgards, yiri ka ọ kpebisiri ike ịchọta eziokwu nke na-anaghị abịa. Ọbụna Shannon, nwunye Carl, ga-ejupụta n'ọtụtụ ihe nzuzo na ọdachi nke di ya na ọgọ ya nwoke: "Anyị na-emebi ụkpụrụ omume iji tinye ya na ọrụ nke ọdịmma anyị mgbe anyị chere na anyị na-eyi mkpọ anyị egwu . "
Ga-eso ebighi ebi arụmụka n'etiti ndị na-agụ naanị ndị chọrọ Harry Oghere na ndi nke anyi ji enwe obi uto na mkpuru edemede obula nke Nesbø na-ede, ma ọ bụ gbasara onye uwe ojii ahụ anyị hụrụ n'anya na ihe mgbu ma ọ bụ banyere akụkọ ọ bụla batara m n'obi.
Ha nile nwere akara ha, ya pụrụ iche dissection nke mmadu atuaha, nke kachasị mma na nke kachasị njọ anyị nwere ma ọ bụ ihe anyị nwere ike, ikike ya ime ka anyi chee otu ihe na ihe ozo eji akuko ahu di uzo, nye ndi mmadu bi na obi, ịchọ anyị wee wepu ebe ahụ gbara ọchịchịrị ma zie ezi. Na Nesbø, na mgbe niile n'enweghị obi abụọ, ọchịchịrị ahụ ziri ezi dị ka ìhè.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Black akwụkwọ » Alaeze, akwukwo ohuru nke Jo Nesbø. Nyocha
MARIA LUZ ANIBARRO HERNANDEZ dijo
eme Ọnwa 10
Ọ bụ oge mbụ m gụrụ onye edemede a. Akwụkwọ ahụ na-atọ m ụtọ mana ọ nwere ụfọdụ ntụgharị asụsụ ntụgharị. A gwara m na Nesbo bụ eze nke akwụkwọ oji na-ewe m iwe.
Zaghachi MARIA LUZ ANIBARRO HERNANDEZ
Emilia Pardo Bazán. Isua 100 ke enye ama akakpa. Ibe akwukwo